Kuthiwani uma lutho ungafuni?
Ngoba zikhona izinsuku lapho ungafuni lutho? Akukho isifiso ukuya emsebenzini, enze isimiso ezibonakala imisebenzi ... ngisho uxoxe nabangani bakho - ungafuni nokuthi-ke! Nokho, kulesi sifundazwe, akumangalisi, ngoba abantu - kuyinto kwakha isimiso esiyinkimbinkimbi biosocial, ngaphakathi okuyinto zenzeka nsuku izinkulungwane nsuku zonke kokubili izinqubo bokuphila nangokwengqondo.
Yebo, kepha wesabeka kuwo kukhona Nokho, into, ukuba acabange ukuthi kungani ungafuni ukwenza, kuyakufanelekela. Ngokwesibonelo, ekuseni phakathi nesonto, uma udinga ukusheshe sivuke ukuze ukuya emsebenzini, okubangela imizwa yakho yokuphelelwa ithemba kakhulu. Ngenhliziyo yonke yami ukubhikisha, kodwa waduduza yena ukuthi unento efana ne: "Yebo. Wozani, bonke ngakho" Futhi kuvela ukuthi akulungile ngokuyinhloko. Iqiniso lokuthi ungenayo isifiso ukuya emsebenzini futhi niqhubeke nomsebenzi engathandwa. Ngakho, ukuqeda isimo ecindezelekile zihlotshaniswa nemicabango enjalo, umsebenzi idinga ukushintshwa. Ngokuqinisekile ingane wena ngiphupha ukuba umuntu, akunjalo? Amaphupho Lifezekile akakaze sekwephuzile. Futhi ngisho noma iholo buzoba buncane: abangeke baze bemukele noma ngeke ufaniswa nomuzwa wokwaneliseka umuntu uthola, ukwenza izinto ozithandayo.
Uma bin noma entabeni izitsha ekhishini elinde in amaphiko isikhathi eside, njengoba uya ngokucophelela emhlabeni ikamelo side, ngifuna nje ngenjongo zithole ukudla efrijini, kuba - the ubuvila abavamile kakhulu, hhayi okuthile engqondweni has cishe lutho. Bhekana nalo, ungakwazi kuphela ngumnikazi: udonsa amathiphu kuleli cala, njengoba umthetho, nomphumela ofiselekayo abuzange.
Noma mhlawumbe ungafuni lutho kusukela lokuthi wena esetshenzwa ngokweqile? Cishe, ngemva kwamahora angu-kosuku umatasa ulwela "ukuphumula" sikanye-TV noma i-Internet. In ekulweni "nichegonehoteniem" abazange basize, kodwa okunalokho: enwetshiwe amandla yamuva namandla. Ngakho-ke, ngisho noma ungazizwa like ekupheleni kosuku, zama ukuhamba wedwa. Futhi hlela run omkhulu. Akubalulekile ngemuva kwamahora eside lomsebenzi okuphindayo ukulalela umculo kusukela sesidlali, noma uphinde ufunde incwadi (nakuba Ukufundwa nakanjani into kuhle futhi kumnandi - ngalesiya sikhathi ezahlukene).
Kodwa lokho amanga ngemuva ukwenqena ukuxhumana nabangani bakho? Kungaba khona eziningana. Ngokwesibonelo, ukuba ngamunye wethu uyajabula eyinqaba okwesikhashana sengathi onkom 'idla yodwa. Futhi izingxoxo nabantu ngesikhathi lidala efanayo futhi nesithukuthezi. Lokho kungokwemvelo, ngisho noma - i extrovert. Futhi uma - unkom 'idla yodwa, ukhathazwa futhi nakakhulu ngakho ngeke kukusize ngalutho kuso. Kubantu abanalesi sici ngokwengqondo zokuxhumana ngokuvamile umsebenzi wangempela. Ezinye ukugxekana introverts ngukutsi ngokuphelele awufuni futhi ukuze uxhumane nethimba noma iqhaza izenzakalo ezinkulu, futhi bebonke - ukuhola yokuphila asebenzayo. Nokho, asikho isidingo aziqinisekise ngobufakazi obuthile: wena njengoba nje wena, kodwa ngenxa ahole yokuphila ukuthi kubonakala wena ukhululekile kakhulu.
Abanye ochwepheshe bathi uma uzizwa hhayi njengawe kufanele ulalele umzimba wakho: umane isango futhi singenzi lutho. Ake egumbini ethulile, futhi uhlala esihlalweni futhi sibheke iphuzu elilodwa. Umthelela akuyona eside ukulinda: kwemizuzu engu-10 wena uyamesaba ufuna ukwenza okuthile.
Eqinisweni, ngisho abantu bengasinaki, okuhlala isikhathi esingaphezu kwesonto, kufanele ubangele ukukhathazeka. Kuleso simo, uma ungafuni ukuba okungenani inyanga, kungcono ukuba zifune usizo izazi zokusebenza kwengqondo, ngoba lokho isimo angakhula abe ngaba nokucindezeleka okukhulu, okuthi kuzo ngesinye isikhathi kunzima kakhulu.
Sanguine, choleric: izici senhliziyo
Kotoshapka wakhuluma: incazelo kanye izikimu Wabasaqalayo
Inkampani "Mascotte": izicathulo kanye izesekeli zonke izikhathi
Umuthi 'Teveten. " imfundo
Indlela ukupheka broccoli futhi ube nempilo.
Isihlahla se-Lily-of-the-valley: incazelo, ukutshala, ukulima, ukubuyekezwa
Nini futhi kanjani ukusebenzisa ezemidlalo esihlakaleni yokuvala
Iphone kusukela Melika - kungenzeka